Filipina, Fanontanian’ireo Sisam-patin’ny Rivodoza: ‘Aiza ny Mpitondra Antsika?’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2013 22:26 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Español, Português, Esperanto , Italiano, polski, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Andro enina izay no lasa hatramin'ny nandalovan'i Haiyan (Yolanda), ilay onjan-drano mahery namely ny faritra afovoany amin'i Filipina, saingy tsy mbola nomena fanampiana ihany ny maro amin'ireo sisam-paty. Maro ireo vatana mangatsiaka mivalampatra eny an'arabe, mangataka sakafo ireo mpialokaloka, ary tsy tonga any amin'ireo nosy lavitra any amin'ireo faritany ravan'ilay rivodoza ao Visayas ny asa famonjena.
Niteraka onja toy ny “tsunami” i Haiyan, izay namoizana ain'olona an'aliny tanatin'ny indray mipi-maso monja. Ny faritanin'i Leyte sy Samar no tena isan'ny faritra voa mafy indrindra, ahitàna tanàna nanjary toy ny fanariam-pako. Araka ny tatitra ofisialy farany, maherin'ny 2.000 no namoy ny ainy saingy mety mbola ho avo noho izany ny fahavoazana satria marobe ireo faty no mbola tsy voaangona.
Andro 5 taorian'ny faharavàna, aiza ny governemanta? @govph Efa vita ny fianaran-draharaha nataonao ry Pnoy, fotoana izao hampandehanana haingana ny zavatra rehetra! #shame #yolandaph
Mahonena, andro 6 taorian'ny namelezan'i #YolandaPH, zara raha tsapan'ireo sisam-paty ny fanampiana avy amin'ny Gov'ta. Mbola betsaka ireo faty mitsiatra eraky ny arabe miandry mpaka azy
Miraraka avy amin'ny lafintany rehetra ny fanampiana saingy tsy misy rafitra fitsinjaràna mahomby ho an'ireny fanampiana ireny:
Rakotra fanampiana, ary dia mbola noana hatrany ireo niharam-boina tamin'ilay rivodoza no sady mangatsiaka. Antenaina mba hamaha faran'izay haingana ny olan'ny fanaterana azy ireny ny @govph !!! #YolandaDay6
‘Mahasorena ny tsy fahitàna mihitsy asa famonjena na iray aza. Tsy misy ezaka goavana na efa voapetraka ho fanampiana. Tena mahavaka saina ‘ – @sanjuncssr #YolandaPH
Raha noraisina ho i Tacloban no ‘ivo fiaingàna’ amin'ity loza mahatsiravina ity, mba rava ihany koa ireo nosy hafa ary tsy voatatitra araka ny tokony ho izy ny zavatra misy any an-toerana any. Nitsidika ny faritanin'i Capiz i Ayi Hernandez ary mizara ny zavatra hitany :
Na ny fiara mpamonjy voina aza tsy navelan'ny hatezeran'i #Haiyan#YolandaPH hiangana tao Hernani , ESamar @CarinAtPlan @PlanPhilippines pic.twitter.com/8csmSTcxsQ
Fiara telo potika manerana ny làlana taorian'ny fandalovan'i #Haiyan #YolandaPH tao ESamar @PlanPhilippines @CarinAtPlan pic.twitter.com/ZAYXSabA4p
Ruffy Biazon, manampahefana ao amin'ny governemanta, manoratra izay heverina fa tokony hatao haingana :